Dulwich College Yangon International School ကျောင်းဝင်ခွင့်အခမ်းအနား - Myanmar Network
Dulwich College Yangon International School ကျောင်းဝင်ခွင့်အခမ်းအနား
Posted by Myanmar Network on June 7, 2016 at 11:37 in ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ Dulwich College Yangon ကျောင်းများ၏ ကျောင်းဝင်ခွင့်လက်ခံသည့် အခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်ကြပါရန် မိဘများနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ဆရာဆရာမများ နှင့်တွေ့ဆုံပါ၊ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် Dulwich က ထူးခြား ထင်ရှားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်များကို လေ့လာပါ။
Dulwich College Yangon သည် အသက် ၂ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အတွင်း ကလေးများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဗြိတိသျှပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တွင် ပန်းလှိုင်ကျောင်းဝင်းနှင့် ကြယ်စင်မြို့တော် ကျောင်းဝင်းဟူ၍ ကျောင်းဝင်းနှစ်ခုခွဲထားပြီး ယခုအခါ အဆိုပါကျောင်းနှစ်ခုလုံးအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်များ စတင်လက်ခံနေပါပြီ။ ပန်းလှိုင်ကျောင်းတွင် ၂၀၁၆/၁၇ နှင့် ၂၀၁၇/၁၈ ပညာသင်နှစ်များအတွက် လျှောက် လွှာများလက်ခံနေပြီး ကြယ်စင်မြို့တော်ကျောင်းအတွက်မူ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လတွင် First intake စတင် သင်ယူမည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် လျှောက်လွှာများ လက်ခံနေပါသည်။
Dulwich College Yangn သည် လန်ဒန်ရှိဗြိတိသျှပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည့်၊ ဂုဏ်သတင်း ကြီးမားသည့် Dulwich College နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပထမဆုံးကျောင်း တစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ အာရှတစ်လွှားရှိ ရှန်ဟိုင်း၊ ဘေဂျင်း၊ စူးကျိုး၊ ဆိုးလ်နှင့် စင်္ကာပူတို့မှ Dulwich College ကျောင်းများနှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ Dulwich College ကျောင်းသားဟောင်းများ သည် ယူကေ၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူနှင့် တခြား သောနိုင်ငံများရှိ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် သေချာပါသည်။
Dulwich College Yangon ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်နည်းများကို သိရှိလေ့လာ လိုပါက Dulwich College Yangon ကျောင်း၏ ကျောင်းအုပ်ကြီး Daryl Orchard နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကလေးများအတွက် စာသင်ခန်းလှုပ်ရှားမှုများ၊ မြန်မာဘာသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ တို့ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ဆက်မှုများ၊ ခေတ်အမီဆုံး အဆင့်မြင့်ဆုံး ကျောင်းဝင်းအဆောက်အအုံနှင့် အထောက် အကူပြုပစ္စည်းများကို မွန်းလွဲပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အမည်စာရင်းပေးသွင်းတက်ရောက်သော ဧည့်သည်တော်များအား ကံစမ်းမဲလက်ဆောင်များဖောက်ပေး မည်ဖြစ်ပါ၍ လက်ဆောင်ကောင်းရယူနိုင်ရန်အတွက် အောက်တွင် အမည်စာရင်းပေးသွင်းပါ။
Dulwich College Yangon Admissions Seminar
Parents and children are invited to join Dulwich College Yangon to launch admissions of our schools here in Yangon. Meet the teachers, view the facilities and learn about the difference Dulwich can make to your child.
Venue: Sule Shangri La
Dulwich College Yangon isaBritish Independent school for children aged2– 14. Spread over two campuses in Yangon, Pun Hlaing and Star City, admissions for both campuses are now open. The Pun Hlaing campus is now accepting applications for both the 2016/17 and 2017/18 academic year and the Star City campus is accepting applications for the first intake of students in August 2017.
Dulwich College Yangon is the first school in Myanmar to haveadirect link toaBritish Independent school, the prestigious Dulwich College in London. The school joinsanetwork of Dulwich College schools across Asia in Shanghai, Beijing, Suzhou, Seoul and Singapore. Dulwich College alumni secure places in the world’s leading universities in the UK, USA, Singapore and other countries.
Join Daryl Orchard, Headmaster of Dulwich College Yangon, and teachers to learn about the Dulwich College Yangon curriculum and admissions procedures. Classroom activities available for children, presentations in English and Myanmar language and introductions to our state-of-the-art campus facilities throughout the afternoon.
Registered guests will be entered intoalucky draw, register below for your chance to win.